China 10T tube ice igwe ụlọ ọrụ na ndị na-ebu ya | Herbin Ice Systems
Ike na-agba ọsọ: 31.25 KW.
Okpomọkụ Ice: Mwepu 5 ℃.
Ice nwere àgwà: Piel na kristal.
Ice n'obosara: 22mm, 29mm, 35mm ma ọ bụ ọzọ.
Refrigerant: R404a, R448a, R449a, ma ọ bụ ọzọ.
Nweta ike: 3 adọ ulo oru ike ọkọnọ.
Ice nwere ike ịpụta kwa ụbọchị: 10,000 kgs nke ice tubes kwa awa 24.
Workingkpụrụ ọrụ ọnọdụ: ọnọdụ 30 ℃ na ọnọdụ 20 20 mmiri dị ọkụ.
Ike oriri: 75 KWH nke ọkụ eletrik maka ịme kwa 1 tan ice flakes.
Akpụrụ tub bụ ụdị ice dị na oghere oghere na mpụga ø22 、 ø29 、 ø35mm na ogologo 25 ～ 42mm. Oghere oghere na-abụkarị -0 ～ 5mm ma enwere ike gbanwee ya dịka oge ịme ice.
Atụmatụ: Akpụrụ ice dị oke na transperent na ogologo oge nchekwa. O yikarịrị ka ọ ga-agbaze na obere oge. Ice tub dị ezigbo mma, ọ nwere ike ịbụ 100% transperent, kristal. Ọ dị ezigbo mma na ihe ọverageụverageụ, ihe ọ drinkụ drinkụ.
Ngwa: Iri nri kwa ụbọchị, ihe ọ coolingụ coolingụ jụrụ, ihe ọ drinkụ drinkụ, idebe akwụkwọ nri na nri azụ, wdg.
Foto nke igwe igwe igwe 10T / ụbọchị anyị mere n'ihu.
Ndị a bụ uru dị ukwuu nke igwe ice ice m.
1.Theomi nke kachasị mma na nke kachasị mma.
Dị iche na ụlọ ọrụ igwe akpụrụ mmiri ndị ọzọ, sistemụ Herbin Ice hapụrụ usoro teknụzụ akụrụngwa akpụrụ mmiri nke China na 2009. Anyị na-amalite ịmụ na nyocha teknụzụ ice Vogt kemgbe 2009.
Site na nyocha na mmepe nke nwayọ na-aga n'ihu, anyị nwere ike iji igwe ice tube rụọ ọrụ kacha mma. Igwe igwe igwe na-akwụsi ike ma nwee ogologo oge ọrụ. Machines bụ ịrụ ọrụ nke ọma ma na ike-azọpụta. Akpụrụ Ice mere site na igwe bụ uzo, kristal mara mma.
Ngwaọrụ nwere teknụzụ akachasị ikpeazụ. Evaporators nwere ihe mmetụta mmiri mmiri, nke na-eme ka mmiri mmiri dị mma. Ọ na-eme ka sistemu okpomọkụ nke sistemu na-achịkwa nke ọma. Ka ọ dị ugbu a, anyị na-agbakwunye onye na-enweta mmiri mmiri n'elu evaporator, 2 okpomọkụ ex-ndị na-agbanwe na ebe ndị dị mkpa, ezigbo mmiri mmiri, wdg.
The Compressor ga-anọgide na-arụ ọrụ na ọnọdụ kachasị mma mgbe ndị ọzọ na-eji igwe eji igwe ihe igwe ice eme ihe na-emebi ngwa ngwa n'oge iwepụ.
2. Power ịzọpụta.
Ekele anyị elu technology na smart usoro imewe, anyị nwere ike iji nta Compressor iru otu ice ikike. E jiri nke ahụ tụnyere igwe igwe ice ndị ọzọ dị na China. Site na obere compressor, igwe igwe igwe anyị na-ere obere ọkụ eletrik iji mee otu ice.
Ka anyị gbakọọ na igwe 10T / day tube ice.
Igwe ndị ọzọ na-agba mmiri nke mmiri China na-ere ọkụ 105KWH nke ọkụ eletrik maka ịme kwa 1 ice.
Igwe igwe m na-aumeụ naanị 75KWH nke ọkụ eletrik maka ịme ice ọ bụla 1.
Ihe dị iche maka ịme 1 tan ice tubes bụ 30KWH nke ọkụ eletrik.
Ya mere, kwa ụbọchị, ọdịiche nke ọkụ eletrik bụ 30x10 = 300KWH.
(105-75) x 10 x 365 x 10 = 1,095,000 KWH, nke ahụ bụ ihe ọkụ eletrik dị iche na afọ 10.
Ọ bụrụ na ndị ahịa ahọrọ igwe igwe ice m 10T / day, ha ga-echekwa 1,095,000 KWH nke ọkụ eletrik n'ime afọ 10.
Ọ bụrụ na ndị ahịa ahọrọ igwe na-enweghị igwe flake ndị ọzọ, ọ ga-etinye ego karịa iji kwụọ ụgwọ oriri eletrik na-enweghị isi, 1,095,000 KWH.
Ego ole maka 1,095,000 KWH nke ọkụ eletrik na mba gị?
1,095,000 KWH nke ọkụ eletrik bụ ihe dị ka US $ 150,000 na China.
3. Ezi mma na ogologo akwụkwọ ikike.
80% nke ihe ndị dị na igwe igwe m bụ akara ama ama mba ụwa dịka Bitzer, GEA Bock, Danfoss, Schneider, were gabazie.
Anyị ọkachamara na ahụmahụ n'ichepụta otu-eji nke ọma na-ezi mmiri.
Nke ahụ na - ekwe gị nkwa igwe igwe akụrụngwa dị mma yana arụmọrụ kacha mma.
Akwụkwọ ikike maka usoro friji bụ afọ 20. Ọ bụrụ na ndị na friji usoro na-arụ ọrụ arụmọrụ ịgbanwe na-adịghị iche n'ime afọ 20, anyị ga-akwụ ụgwọ maka ya.
Enweghi mmanu gas maka ọkpọkọ n'ime afọ iri na abụọ.
Ọ dịghị friji mmiri gbasaa na afọ 12. Gụnyere compressor / condenser / evaporator / mgbasa valves ....
Akwụkwọ ikike maka imegharị akụkụ, dịka moto / mgbapụta / bearin / eletriki, bụ afọ 2.
4. Oge nnyefe ngwa ngwa.
My factory bụ otu n'ime ndị kasị ibu na China jupụtara ahụmahụ ọrụ.
Anyị ekwesịghị karịa 20 ụbọchị iji mee otu ma ọ bụ ọtụtụ 3T / ụbọchị, 5T / ụbọchị, 10T / ụbọchị igwe ice ice.
Anyị achọghị ihe karịrị ụbọchị 30 iji mee otu ma ọ bụ ọtụtụ 20T / ụbọchị, 30T / day tube ice machines.
Oge imepụta maka otu igwe na ọtụtụ igwe bụ otu.
Onye ahịa agaghị echere ruo ogologo oge iji nweta igwe akụrụ mmiri tube mgbe ịkwụ ụgwọ.
Nke gara aga: 5T tube igwe akpụrụ mmiri
Osote: Igwe igwe ice 20T